Egwuregwu ngwa mma nke Yiwu keere ekewa n'ime ahịa Xingzhong, Jinfuyuan ọla Plaza, International Trade City. Soro anyi imuta ihe banyere ngwa ahia ato nke Jeweley nke ozo.
E jiri ya tụnyere Jinfuyuan Jewelry Plaza na International Trade Ciry, ndị ahịa nwere mmasị na ahịa abụọ a karịa ahịa Xingzhong maka ọ bụ ahịa ngwa ahịa Jewelry ochie na ọnọdụ ọjọọ n'ọnọdụ. Mana ọ ka na-adọta ọtụtụ ndị ahịa na-abịa ebe a ịzụta maka ọ bụ ụlọ ọrụ ochie na-eme ka mgbazinye ahụ dị ọnụ ala karịa, na-eduga na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa maka ngwaahịa a.
Jinfuyuan Jewelry Plaza bụ ahịa ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere ahịa abụọ ọzọ, a rụrụ ya afọ 2 gara aga, nke ihe karịrị ụlọ ntu 300, ọnụ ọgụgụ ya pere mpe karịa nke Yiwu International Trade City. Mana ahịa a bụkwa ezigbo nhọrọ, maka na ebe a, ọrụ ahụ dị oke mma, ma ndị mmadụ juru ma ọ bụ agadi dị ka ahịa Xingzhong, n'agbanyeghị agbanyeghị n'ahịa a abụghị nnukwu.
Ahịa ọla dị n ’ụlọ nke atọ nke International Trade City disstrict1, E mpaghara. Nke a bụ nnukwu ahịa ngwa mma nke ọla na-enwe ihe karịrị 800 ụlọ ahịa, na-ere ụdị ngwa ahịa dị iche iche, ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta ngwa ahịa ndị ọzọ yiri ya mgbe ha zụrụ ngwa mma ahụ. Nke a bụkwa ihe mere ọtụtụ ndị ọchụnta ego si mba ọzọ ji amasị ahịa a.